ရငျကို နှေးထှေးစတေဲ့ဖွဈရပျလေးတဈခု…သူ့ရှကေ့လာဘျကောငျ ကလေးလေးကို မိုးမစိုအောငျ လကျနဲ့ကာပေးခဲ့တဲ့ ဆှနျဟောငျမငျ
November 11, 2019 Ye Min Aung News, Premier League 0
ပွီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ ၁၂မှာ အားလုံးရဲ့နှလုံးသားကို လှိုကျခနဲနှေးထှေးစခေဲ့တဲ့ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈပျေါခဲ့ပွီး တော့တငျဟမျတိုကျစဈမှူး ဆှနျဟောငျမငျက သူ့ရှမှေ့ာရှိတဲ့ ကလေးလေးကို ခေါငျးမစိုအောငျ သူ့လကျနှ ဈဘကျနဲ့ ကာပေးခဲ့တဲ့ဖွဈရပျက အားလုံးရဲ့ရငျကို နှေးထှေးစခေဲ့ပါတယျ။
စနညေက တော့တငျဟမျနဲ့ရှကျဖီးလျယူနိုကျတကျတို့ ၁-၁ ဂိုးသရကေခြဲ့တဲ့ပှဲမတိုငျခငျ ကငျမရာတှကေ အဲဒီ ဖွဈရပျလေးကို အမိအရရိုကျယူနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဆှနျဟောငျမငျဟာ အဲဒီပှဲမှာ အသငျးအတှကျ ဦးဆောငျ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ တော့တငျဟမျကတော့ တနျးတကျရှကျဖီးလျယူနိုကျတကျကို အိမျကှငျးမှာ သရသော ကစားနိုငျခဲ့ပွီး ရှကျဖီးလျကတော့ အဆငျ့ ၅နရောအထိ တကျလှမျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၂၇နှဈအရှယျရှိ တောငျကိုရီးယားလကျရှေးစငျ ဆှနျဟောငျမငျဟာ အသငျးဖျောတှနေဲ့အတူ ပွိုငျဘကျ ကစားသမားတှကေို လကျဆှဲနှုတျဆကျဖို့ ပွငျဆငျနခြေိနျ တကယျ့ကိုလူသားဆနျတဲ့အပွုအမူတဈခု ပွုလုပျသှားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဆှနျဟောငျမငျဟာ လာဘျကောငျရုပျလေးအဖွဈ သူ့ရှမှေ့ာရှိနတေဲ့ ကလေး ခေါငျးကိုမိုးမစိုအောငျ သူ့လကျနှဈ ဘကျနဲ့ ကာပေးခဲ့တာဖွဈပွီး ကလေးကလညျး သူ့ခေါငျးပျေါ မိုးရမေကတြာ ဘာလို့လဲဆိုပွီး အဖွရှောစဉျ သူ့ကို ဆှနျဟောငျမငျက လကျနှဈဘကျနဲ့ မိုးမစိုအောငျ ကာပေးထားမှနျးသိသှားပွီးနောကျ သဘောကကြာ ပွုံးသှားပါတယျ။
🎥 | #THFC
Son Heung-Min coveringamascots head from the rain, whatalegend.
He's got suchapure soul and is so humble!
— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) November 10, 2019
လူမှုမီဒီယာမှာလညျး အဲဒီဖွဈရပျက ရပေနျးစားသှားပွီး ပရိသတျတှကေ ဆှနျဟောငျမငျကို နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသား ပိုငျရှငျအဖွဈ တငျစားခြီးကြူးခဲ့ကွပါတယျ။ ”ဆှနျတဈယောကျ Mascot လေးကို မိုးမစိုအောငျ လုပျပေးနတောပါ။ သူ့လိုနှလုံးလှသူမြိုး ဒီကမ်ဘာမှာ ရှိလိမျ့မယျမထငျဘူး”လို့ ပရိသတျတဈဦးက ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
”တကယျ့ကိုကွကျသီးထရလောကျတဲ့အပွုအမူပါပဲ။ ဆှနျက စဈမှနျတဲ့နှလုံးသားပိုငျရှငျဖွဈပွီး မာန ထောငျလှား မှုမရှိ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျနှိမျ့ခတြတျသူပါ”။ ”တကယျလို့ ကမ်ဘာ့စိတျ သဘောထား အကောငျးဆုံး ဘောလုံး သမားဆု ပေးမယျဆိုရငျ ဆှနျဟောငျမငျပဲရရှိမှာသခြောပါတယျ။ သိပျကိုခဈြဖို့ ကောငျးတဲ့ အာရှသားလေး”လို့ ပရိသတျတှကေ အသီးသီးရေးသားခဲ့ကွပါတယျ။
အဲဒီဖွဈရပျမတိုငျခငျ ဆှနျဟောငျမငျဟာ ရကျဒျစတားဘဲလျဂရိတျအသငျးကို အဝေးကှငျးမှာ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျမှာလညျး ဂိုးသှငျးယူပွီးနောကျ အောငျပှဲမခံခဲ့ဘဲ အဲဗာတနျကှငျးလယျလူ အနျဒရီဂိုမကျဈကို လကျအုပျခြီကာ တောငျးပနျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဆှနျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျသတ်တပတျက ဂိုမကျဈ ခွကေငျြးဝတျအရိုးကြိုးသှားတဲ့အထိ ဒဏျရာပွငျးထနျစှာရရှိခဲ့တဲ့ မတျောတဆမှုမှာ သူက ပထမဆုံးဖကျြထုတျလိုကျသူဖွဈလို့ ကှငျးထဲမှာပဲ မကျြရညျတှကြေ ဝမျးနညျး ပကျလကျ ဖွဈခဲ့ရပွီး ဆားဘီးယားမွမှော ဂိုးသှငျးပွီးနောကျ ကငျမရာရှမှေ့ာ ဂိုမကျဈကို တောငျးပနျတဲ့အကွောငျး လကျအုပျခြီကာ တောငျးပနျခဲ့တာပါ။
ရင်ကို နွေးထွေးစေတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု…သူ့ရှေ့ကလာဘ်ကောင် ကလေးလေးကို မိုးမစိုအောင် လက်နဲ့ကာပေးခဲ့တဲ့ ဆွန်ဟောင်မင်
ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၁၂မှာ အားလုံးရဲ့နှလုံးသားကို လှိုက်ခနဲနွေးထွေးစေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တော့တင်ဟမ်တိုက်စစ်မှူး ဆွန်ဟောင်မင်က သူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ ကလေးလေးကို ခေါင်းမစိုအောင် သူ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကာပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်က အားလုံးရဲ့ရင်ကို နွေးထွေးစေခဲ့ပါတယ်။ စနေညက တော့တင်ဟမ်နဲ့ရှက်ဖီးလ်ယူနိုက်တက်တို့ ၁-၁ ဂိုးသရေကျခဲ့တဲ့ပွဲမတိုင်ခင် ကင်မရာတွေက အဲဒီဖြစ်ရပ်လေးကို အမိအရရိုက်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွန်ဟောင်မင်ဟာ အဲဒီပွဲမှာ အသင်းအတွက် ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် တော့တင်ဟမ်ကတော့ တန်းတက် ရှက်ဖီးလ်ယူနိုက်တက်ကို အိမ်ကွင်းမှာ သရေသာကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ရှက်ဖီးလ်ကတော့ အဆင့် ၅နေရာအထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၇နှစ်အရွယ်ရှိ တောင်ကိုရီးယားလက်ရွေးစင် ဆွန်ဟောင်မင်ဟာ အသင်းဖော်တွေနဲ့ အတူ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန် တကယ့်ကိုလူသားဆန်တဲ့ အပြုအမူတစ်ခု ပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆွန်ဟောင်မင်ဟာ လာဘ်ကောင်ရုပ်လေးအဖြစ် သူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ ကလေး ခေါင်းကိုမိုးမစိုအောင် သူ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကာပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကလေးကလည်း သူ့ခေါင်းပေါ် မိုးရေမကျတာ ဘာလို့လဲဆိုပြီး အဖြေရှာစဉ် သူ့ကို ဆွန်ဟောင်မင်က လက်နှစ်ဘက်နဲ့ မိုးမစိုအောင် ကာပေးထားမှန်းသိသွားပြီးနောက် သဘောကျကာ ပြုံးသွားပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာမှာလည်း အဲဒီဖြစ်ရပ်က ရေပန်းစားသွားပြီး ပရိသတ်တွေက ဆွန်ဟောင်မင်ကို နူးညံ့တဲ့နှလုံးသား ပိုင်ရှင်အဖြစ် တင်စားချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ ”ဆွန်တစ်ယောက် Mascot လေးကို မိုးမစိုအောင် လုပ်ပေးနေတာပါ။ သူ့လိုနှလုံးလှသူမျိုး ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိလိမ့်မယ်မထင်ဘူး”လို့ ပရိသတ်တစ်ဦးက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ”တကယ့်ကိုကြက်သီး ထရလောက်တဲ့ အပြုအမူပါပဲ။ ဆွန်က စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး မာနထောင်လွှားမှုမရှိ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှိမ့်ချ တတ်သူပါ”။ ”တကယ်လို့ ကမ္ဘာ့စိတ်သဘောထားအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု ပေးမယ်ဆိုရင် ဆွန်ဟောင်မင်ပဲ ရရှိမှာသေချာပါတယ်။ သိပ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အာရှသားလေး”လို့ ပရိသတ်တွေက အသီးသီးရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်မတိုင်ခင် ဆွန်ဟောင်မင်ဟာ ရက်ဒ်စတားဘဲလ်ဂရိတ်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်မှာလည်း ဂိုးသွင်းယူပြီးနောက် အောင်ပွဲမခံခဲ့ဘဲ အဲဗာတန်ကွင်းလယ်လူ အန်ဒရီဂိုမက်စ်ကို လက်အုပ်ချီကာ တောင်းပန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဆွန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်က ဂိုမက်စ် ခြေကျင်းဝတ်အရိုးကျိုးသွားတဲ့အထိ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တဲ့ မတော်တဆ မှုမှာ သူက ပထမဆုံးဖျက်ထုတ်လိုက်သူဖြစ်လို့ ကွင်းထဲမှာပဲ မျက်ရည်တွေကျ ၀မ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးဆားဘီးယား မြေမှာ ဂိုးသွင်းပြီးနောက် ကင်မရာရှေ့မှာ ဂိုမက်စ်ကို တောင်းပန်တဲ့အကြောင်း လက်အုပ်ချီကာ တောင်းပန်ခဲ့တာပါ။
VAR ကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျကို ဂှါဒီယိုလာ ကြောခိုငျးသှားနိုငျတယျလို့ သတိပေးလိုကျတဲ့ ဆငျကလဲယား